Fifandraisana mafana - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2019-03 > Fifandraisana mafana
Mahafinaritra ny hanana fotoana falifaly, mirary saina ary mifaly amin'ny fifandraisana mafana. Mipetraka eo akaikin'ny tsirairay, mankafy sakafo matsiro ary miaraka amin'ny fanarahana fifandraisana am-pirahalahiana mandritra ny resaka. Ny olona tsy marim-pototra teo amin'ny sary eo anoloana dia nanaitra ahy mafy. Ny ankizy sy ny zafikeliny dia mifaly amin'ny zokiolona amin'ny fihomehezana ary mandany fotoana mahafinaritra sy mahafinaritra.
Efa naniry ny hanananao trangan-javatra manome aingam-panahy toy izany ve ianao? Angamba te hahafantatra bebe kokoa momba ny lasa ianao na ny mpitsidika izay tadiavinao ary te hanatsara ny fifandraisanao aminy.
Mizara aminao ny tantaran'ny Zacchaeus malaza aho. Nanankarena izy, ilay manampahefana ambony ao Jeriko ary fohy kely. Dia nitaingina hazo rofia izy nahita an'i Jesosy nandalo. Tsy tiany ny hanakana ny heviny momba an'i Jesosy ny olona.
Rehefa nandalo ilay hazo Jesosy dia niandrandra ka niantso hoe: "Zakaiosy, midina faingana! Tokony ho vahiny ao an-tranonao aho anio. » Nidina haingana avy tao amin'ilay hazo i Zakaiosy ary nitondra an'i Jesosy tamim-pifaliana tany an-tranony. Betsaka ny olona tezitra raha nahita izany. "Ahoana no hanasana azy amin'ny mpanota toy izany!"
Fa nanatona teo anatrehan'ny Tompo Zakaiosy ka nanao hoe: Tompoko, homeko ny malahelo ny antsasaky ny fananako; ary raha efa nanao fahirano olona aho, dia hampodiko efatra heny izy. Ary hoy Jesosy: "Anio no nitondra famonjena ho an'ity trano ity, satria ity lehilahy ity dia zanakalahin'i Abrahama koa" (avy amin'ny Lio. 19: 1-9).
Anjarantsika ny manokatra ny fontsika mba hivoatra ao anaty fifandraisana mafana, na ho an'i Jesosy izany, na ho an'ny mpiara-belona amintsika, na ho an'ny tenantsika. Na izany na tsy izany dia fanamby aho hihazona fifandraisana mafana. Ary ny toetrako dia maneho mazava raha avelako hitarika ahy ny fitiavana. Ny fitiavana dia tsy fahatsapana mandalo fotsiny fa toetra mampiavaka an Andriamanitra sy ny zanany. Noho izany toetra izany amin'ny maha rahalahinao na rahavavin'i Jesosy Kristy anao, raha misy zavatra tsy mety indray eo amin'ny fifandraisanareo, miala amin'ny hazo ary manadio ny fifandraisanareo. Mampiavaka anao amin'ny maha vahiny tsy manam-paharoa anao hanaiky ny fitiavana, toa ny mampiavaka ny tompon-trano ny hanomezany ny vahiny ny fitiavany sy ny sainy.
Ho an'ny fihaonana manaraka amin'ny namana na havana, mirary anao mahafinaritra sy mahafinaritra be aho!